PE Electrofuion Fittings ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
22-04-01 တွင် admin မှ
1. တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း၊ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များနှင့် အခြားအရာများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းထည့်ခြင်း၏ အတွင်းနံရံနှင့် ပိုက်၏ ဂဟေဆော်သည့်နေရာကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။ဓာတ်တိုးခြင်းအလွှာကို ပွတ်တိုက်ပြီး အညီအမျှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖယ်ရှားရပါမည်။(ဂရုစိုက်ပါ...
HDPE ပိုက်၏ အဓိက ကုန်ကြမ်းများနှင့် လက္ခဏာများ
admin မှ 22-02-23 ရက်နေ့တွင်
PE ပိုက် (HDPE ပိုက်) ကို အဓိက ကုန်ကြမ်းအဖြစ် polyethylene ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး antioxidants၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်နှင့် အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်ပါသည်။၎င်းသည် နိမ့်သောသိပ်သည်းဆ၊ မြင့်မားသောတိကျသောခွန်အား၊ ကောင်းမွန်သောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုတို့ကြောင့် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပြီး၊ ဖောင်းပွနေသောအပူချိန်သည် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။PE ပိုက် p...
HDPE ပိုက်လိုင်း၏ တူးဖော်ခြင်းမဟုတ်သော နည်းပညာ
21-11-03 တွင် admin မှ
မြူနီစီပယ်မြေအောက် အဆောက်အအုံများတွင် ရေရှည်မြှုပ်နှံထားသည့် ပိုက်လိုင်းစနစ်သည် လက်လှမ်းမမီနိုင်သလို မမြင်နိုင်ပေ။ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်ခြင်းစသည့် ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်း တူးဖော်ပြုပြင်ရန် "အဖွင့်" လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံသားများအတွက် ကြီးစွာသော အဆင်မပြေမှုများ ရှိလာသည်..။
HDPE Siphon ရေနုတ်မြောင်းစနစ်
စီဖွန်ရေနုတ်မြောင်းအကြောင်းပြောရင် လူတိုင်းက သိပ်မရင်းနှီးကြဘူး၊ ဒီတော့ siphon ရေနုတ်မြောင်းတွေ နဲ့ သာမန် ရေနုတ်မြောင်းတွေကြားက ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲ။သိရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လာ၍ လိုက်နာပါ။ပထမဦးစွာ၊ ရေနုတ်မြောင်းမြင်ကွင်းရှိ siphon ရေနုတ်မြောင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပြောဆိုကြပါစို့။ ။
Edwardsville တွင်နေထိုင်သူများသည် ယခုနွေရာသီတွင် လမ်းစင်္ကြံများ၊ မြောင်းများနှင့် လမ်းများပြုပြင်ရန် မျှော်လင့်နိုင်သည်။
admin မှ 21-08-05 ရက်နေ့တွင်
မြို့တော်၏ နှစ်စဉ် မြို့တော် မြှင့်တင်ရေး ရန်ပုံငွေ ပြုပြင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ ဤပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော လူသွားစင်္ကြံများကို မကြာမီတွင် မြို့တွင်း၌ အစားထိုးသွားမည် ဖြစ်သည်။Edwardsville- မြို့တော်ကောင်စီသည် အင်္ဂါနေ့တွင် အမျိုးမျိုးသော အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို အတည်ပြုပြီးနောက်၊ မြို့အနှံ့နေထိုင်သူများသည် လာမည့်အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းများကို မြင်တွေ့ရပြီး...
Global High Density Polyethylene Market (2021 မှ 2026) – စက်မှုခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ မျှဝေမှု၊ အရွယ်အစား၊ ကြီးထွားမှု၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် ခန့်မှန်းချက်များ
21-06-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
DUBLIN၊ မေလ5ရက်၊ 2021 ခုနှစ် /PRNewswire/ — "High Density Polyethylene (HDPE) စျေးကွက်- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ မျှဝေမှု၊ အရွယ်အစား၊ ကြီးထွားမှု၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် ခန့်မှန်းချက် 2021-2026" အစီရင်ခံစာကို ResearchAndMarkets.com ၏ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြင့်မားသော သိပ်သည်းဆ polyethylene (HDPE)...
PE ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပရောဂျက်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးစိတ်အဆင့်များနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိရပါမည်။အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား PE ပိုက်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်း၊ ပိုက်တင်ခြင်း၊ ပိုက်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အခြားရှုထောင့်များမှ သင့်အား မိတ်ဆက်ပေးပါမည်။1.Pipe ချိတ်ဆက်နည်းများ- ma...
Chuang Rong's Booth: 17Y24 မှကြိုဆိုပါတယ်။
admin မှ 21-05-27 ရက်နေ့တွင်
2021 ခုနှစ် ဧပြီလ 13 ရက်နေ့မှ 16 ရက်နေ့အထိ Chinaplas International Rubber & Plastics Exhibition ကို Shenzhen International Convention and Exhibition Center တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဤပြပွဲသည် Shenzhen International Convention တွင် မဏ္ဍပ် ၁၆ ခုနှင့် ပြပွဲနေရာ ၃၅၀,၀၀၀ စတုရန်းမီတာကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။